Bichar Khabar » विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ
12 Apr 2019 07:04:01 PM | No Comments
शिक्षाको संरचना भएको परिवर्तनले निजी शिक्षण संस्थालाई कस्तो असर परेको छ ?
अहिले शिक्षा भनेको एउटा ठाउँ विशेष भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले नै त्यही अनुसारकै नीति नियमको पालना गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रा विद्यार्थीहरु अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारबजारमा विक्रि हुने किसिमको बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ । अहिले स्थानियतहका विद्यालयमा दक्षजनशक्ती अभाव र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भौतिक शैक्षिक साधनस्रोतको अभावमा विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता नै छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको उल्लेख्य आवेदन पर्ने गरेको छ । सरकारले सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने हो भने नजीशिक्षण संस्थालाई पनि चुनौति थपिन्छ । निजी शिक्षण संस्थाले राज्यलाई कर तिरेका छन् । छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइरहेकै छन् ,पुजीपलायन हुनबाट रोकेका छन् त्यसैले नजी शिक्षण संस्थाको योगदानलाई पनि राज्यले कदर गर्नुपर्छ ।
दश कक्षा उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीलाई व्रिजकोर्स आवश्यक छ कि छैन ?
दश कक्षा उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीले विज्ञान संकायमा अध्ययन गर्ने हो भने व्रिजकोर्स आवश्यक छ ।अन्य विषय अध्ययन गर्नका लागि व्रिजकोर्स नै गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन । खालि समयको सदुपयोग गर्न ,कक्षा दश र कक्षा एघार विचमा रहेको कोर्सको ग्याप कम गर्न अझै पनि व्रिजकोर्स गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले परिमार्जन हुन गइरहेको पाठ्यक्रम लागु भएमा विज्रकोर्स गर्नुपर्ने वाध्यता हट्नेछ ।
विद्यालय व्यवस्थापनका समस्याहरु के के देख्नुहुन्छ ?
विद्यालयमा विभिन्न खाले समस्याहरु देखा पर्ने गर्दछन् । सरकारले ल्याएको फरक फरक नीतिका कारण विद्यालय शिक्षा प्रभावित हुने गरेको छ । राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनको चन्दा आतंकका कारण समस्या पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय विद्यालय व्यवस्थापनमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको दक्षजनशक्ती अभाव हो । राजनीतिक दलका विभिन्न गतिविधीले अन्योलको स्थिति सृजना हुने गरेको छ ।
अन्त्यमा दश कक्षा उत्तिर्ण भई एघार कक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले व्लुवर्ड कलेजलाई नै किन रोज्ने ?
यस विद्यालयले आफ्नो स्थापना कालदेखी नै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । यहाँका उत्पादनले स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालयमा राम्रो नतिजा निकाल्न सफल भएकै कारण पनि यस विद्यालय विद्यार्थी तथा अभिभावकको रोजाईमा पर्ने गरेको छ ।यहाँका उत्पादनले स्वदेश तथा विदेशका छात्रवृत्तिकोटामा नाम निकालेर अध्ययन गर्न सफल भएका छन् । यहाँ विद्यार्थी मैत्रि वातावरणमा ,दक्ष तथा अनुभवि शिक्षकद्वरा अध्यापन गराउनुका साथै अध्यापनमा नै बढी केन्द्रित भएकाले आम अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाईमा व्लुवर्ड पर्दै आएको छ ।